Weekday မှာ အလုပ်တွေကြောင့် အသားအရေလေးတွေ ပင်ပန်းနေပြီလား? ဒါဆို Holiday မှာ New Skiin Whitening Selfie Face Mask နဲ့အတူ Skin ကို အားဖြည့်လိုက်ရအောင်နော် 😘 ကျန်းမာပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့အနားယူမှုနဲ့ ရေတစ်လီတာခွဲခန့် သောက်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask လေးကပ်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါပြီ ❤ 💎New Skiin Mask💎 ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
Skin Care ရမှာ စိတ်ရှုပ်နေလား အမျိုးသားတို့ . . . New Skiin Mask လေးကို တစ်ပတ် ၂ ရက်ကပ်ပေးရင် အထိရောက် အလွယ်ကူဆုံး Skin Care ခြင်းရလာဒ်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. အမျိုးသားတိုင်းအတွက် လွယ်ကူ မြန်ဆန်တဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု . . . ဆရာနီပြောရင် ယုံလိုက်ပါ.
💎New Skiin Whitening Selfie Face Mask💎 လေးကိုသာ ပုံမှန်ကပ်ပေး Selfie Ready အသားအရေကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ. Glow Glass ပြီး မှန်သားလို ကြည်လင်၀င်းပတဲ့အသားအရေကို တစ်ခါကပ်ရုံနဲ့ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်. Selfie ရိုက်တိုင်းလှနေဖို့ New Skiin Mask ကို ကပ်ကြပါစို့. 💎New Skiin Mask💎 ၅ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်.
ရေဓါတ်ပြည့်၀နေမှ အသားအရေက Glow တွေ Glass တွေ ဖြစ်နိုင်တာလေ. ရေဓါတ်ပြည့်၀နေဖို့က 💎New Skiin Mask💎 လေးကိုသာ ပုံမှန်ကပ်ပေးပါ. 💎New Skiin Mask💎 ထဲမှာ အသားအရေကို ရေဓါတ်ပြည့်၀စွာဖြည့်တင်းပေးမယ့် Molecular Weight မတူညီတဲ့ Hyaluronic Acid ၆ မျိုးတောင် ပါ၀င်ပါတယ်. Glow Glass ဖို့ 💎New Skiin Mask💎 ကို ကပ်ကြပါစို့. 💎New Skiin Mask💎5ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်.
First Page «2» Last Page